Ciyaartoyda xulka qaranka Soomaaliya oo gaaray dalka Zimbabwe - Ceelhuur Online
Home > Ciyaaraha > Ciyaartoyda xulka qaranka Soomaaliya oo gaaray dalka Zimbabwe
Ciyaartoyda xulka qaranka Soomaaliya oo gaaray dalka Zimbabwe
Ciyaaraha Wararka Maanta
September 8, 2019 Duceysane1768
Ciyaartoyda xulka kubbada cagta qaranka Soomaaliyeed iyo mas’uuliyiin ka tirsan xiriirka kubbada cagta Soomaaliyeed ayaa gaaray magaalada Harare ee caasimada dalka Zimbabwe.
Xulka Qaranka Soomaaliya ayaa lagu wadaa in ay lugta 2aad ee isreebreebka Koobka Aduunka la ciyaari doono xulka Zimbabwe talaadada soo socota iyadoo lugtii hore ay xulka qaranka Soomaaliya 1-0 uga badiyeen xulka Zimbabwe.
Ciyaartoyda xulka qaranka ayaa rajo weyn ka qaba in ay guul ka keenaan lugta labaad ee ay la ciyaarayaan xulka Zimbabwe waxaana wajiyadooda ka muuqata rajo weyn ay ka qabaan in ay dhigaan rikoor cusub.
Haddii ay guul ka gaaraan lugta 2aad xulka qaranka Soomaaliyeed ayaa amaba barbaro keenaan ayaa waxa ay u gudbi doonaan tartanka guruubyada ee loogu soo baxayo ciyaaraha adduunka 2022 oo ka dhici doono dalka Qatar.
Amisom oo qaraxyo lagula eegtay deegaanka Buurane
Dowlada oo shuruudo adag ku xirtay siidaynta wasiir Janan
Madaxweynaha Koofur Galbeed oo la Caleemasaaray (Sawirro)
Hayn la’aan ma heli kartaa Haweenay? Waxa Qoray Cumar Seerbiya
Xal Ayuu Leeyahay Khilaafka Dowladda Federaalka & Dowlad-goboleedyada
Daawo: Alshabaab oo 44 Askari looga dilay Baxdo
Qarax khasaare geystay oo ka dhacay gobolka Hiiraan (Sawirro)
Wasiir Beyle Oo Diiday Inuu Hortago Xeer Ilaaliyaha Guud Ee Qaranka.